Dagaal Cusub Oo Maamulista Hawada Ah Oo Ka Dhex Bilowday Somaliland & Somaaliya. – Allsomali.net
HomeSomaliaDagaal Cusub Oo Maamulista Hawada Ah Oo Ka Dhex Bilowday Somaliland & Somaaliya.
14 August 2020 allsomali Somalia, Somaliland, Wararkii Ugu Dambeeyay 1
Waxa soo If baxaya dagaal cusub oo somaliland Iyo Somaliya ku dhexmaraya maamulista Hawada.
Arintan ayaa imanayda kadib markii ay Dowlada Federaalka Somaliya si buuxda maamulista hawada ugala wareegtay Hay’adda Caalamiga ah ee duulista iyo hawada oo markii hore masuul ka ahayd maamulista hawada muddo 28 sano ah.
Ku wareejinta hawadda waxaa ka mid ah wareejinta shaqaalihii ka hoos shaqaynayay Hay’adda Caalamiga ah ee duulista iyo hawada ee ICAO iyo waliba dhamaan dakhligii loo isticmaalayay Hawada oo ay markii hore maamuli jireen Ha’yadda caalamiga ah.
In kasta oo wasiirka duulista Somaliya ee Maxamed Cabdulaahi Cumar uu Todobaadkii hore sheegay in ay Wasaaradiisu saxiixday heshiiska Laakiin Dawlada Somaliland ayaa dacwad ka gudbisay Qaramada Midoobay.
Maxamed ayaa bogiisa ku soo qoray” Illahay Ayaa mahad leh waxa aan maanta si guul leh heshiis uga saxiixanay Hay’adda Caalamiga ah ee ICAO Iyo IATA Anaga oo si buuxda ula wareegnay maamulista hawada iyo waliba dhamaan shaqaalaha iyo dakhliga waxana uu heshiiskaas dhaqan galaya 30 bishii July”.
Laakiin xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in heshiisyada la saxeexay ay ka hor yimaadeen heshiisyadii hore isla markaana ay hore dacwad uga gudbisay Qaramada Midoobay.
Safiirka Somaliland u fadhiya Kenya Baashe Cumar ayaa xaqiijiyey in dalku u gudbiyay xafiiska UN-ka iyo Dalalka kale ee Saaxiibka dacwad ku saabsan arintan waliba beesha caalamu la macaamileen arinta.
“Dawladda Somaliland waxay dacwad rasmi ah ka gudbisay sababta oo ah Soomaaliya waxay jebisay heshiisyadii lagu gaadhay Istanbul markaas oo ay Somaliya iyo Somaliland ku heshiiyeen in ay wada maamulaan Hawada laakiin Bayaankii ay Soo saartay hay’adda ICAO ma aysan fulinin shuruucdii lagu heshiiyay”.
15 August 2020 at 3:10 am
Heshiiska Istanbuul ee la sheegayo waxa is la gaadhey tuug iyo tuug kalakaal e hawada soomaaliya muran ma gelikarto inlayn ka leh waxbaan dawlada fedraalka la maamulayaa wuxu hoos imanayaa isla dawladaase